MAGRO Behoririka : Tokony hifona ny frantsay – MyDago.com aime Madagascar
Nitohy hatrany ny hetsika tsy fankasitrahana ny fitondrana Fat,etsy amin’ny Magro Behoririka androany.Toy ny mahazatra dia misy ny lahateny maro samihafa ataon’ireo mpitarika ny tolona. Anisan’ny nandray fitenenana teny an-toerana ny CT Brenda.Ny zavamisy any amin’iny fartra Ambatondrazaka, Amparafaravola, Andilamena iny dia somary misitrisitrika ny olona. Notanterahana tao Andilamena ny fankalazana ny andron’ny 08 Martsa teo, hoy izy, ka rehefa tonga tany ny tenanay di aniharan’ny antsonjay. Nolazaina taminay fa tsy mahazo miteny nyCst sy CT fa ny vadin’ny sefo distrika no mandray fitenenana. Tsy nanaiky izany anefa ny tenako ka dia izaho no namakilay ny lanonana. Nanomboka teo dia resy lahatra ary tsy natahotra ny olona tany an-toerana.Noho izany dia manantena ny ahita ny Filoha Ravalomanana ny vahoaka any amin’iny faritra iny. Nisy ny hafatra tamin’ny SMS nalefan’i Dada hoy Brenda, nilaza hoe mitsangana ianareo vehivavy, mivondrona ary manana faharetana.
Andriamatoa Memé avyany amin’iny faritry Lalangina iny kosa dia nanambara fa misy ny Hopitaly natsangan-dRajoelina ao Fianarantsoa lazaina fa manaramenitra hono, nefa hirodana tsy ho ela. Misy ihany koa hoy izy tsy lavitra ny distrika izay efa misy trano hatsangana. Rehefa nandalo tany ny tenako dia nisy ny olona nanontany hoe atao inona io trano io.Hopitaly handatsana io satria efa mijaly ny vahoaka. Hopitaly hanaterana ny olona noana. Hopitaly natao niaraka tamin’ny frantsay hanapotehana ny vahoaka Malagasy. Ny zavatra ilainy vahoaka izao,hoy ity olomboatendry ity, dia ny fankatoavana iraisam-pirenena. Raha mandalo ao Befelatanana ao isika dia mahalala fa mijaly ny olona tsy mahazo dokotera. Tsy fantatry Rajoelina izany fa lazaina favitany. Rehefa tsy vita tao anatin’ny telo taona dia aleo miala. Ho an’ny Praiministra Beriziky dia nambarany fa rehea tsy tanteraka ny tondrozotra dia mialà. Aleo mifanena amin’ny mpamosavy toy izay mifanena amin’ny mpandainga. Mikasika ny 29 Martsa dia hilingilingy hankalaza izany kanefa miaraka amin’ny frantsay. Efa tokony hanao fifonana ny frantsay tamin’ireny raharaha 47 ireny. Raha ohatra Rajoelina tsy mahalala ny tantara dia tsy ilainay izany. Tongava maro isika vahoaka eto ankianja hanala ny fanandevozana ataon’ny frantsay.
Frantsay mpanjanaka no mpitondra ny « tsimok’aretina »
Antony folo tokony handrodanana ny FATy
Auteur Solo Razafy*Publié le 27 mars 2012 27 mars 2012 Catégories Politique
6 réflexions sur « MAGRO Behoririka : Tokony hifona ny frantsay »
RAHA TSY HAZO HATAO NY MANKALAZA NY 29 MARS ,DIA FANITSAHANA NY TAMPODOHAN NY VAHOAKA IZANY ,KA NY LALAM BAHOAKA NO TOKONY ,HAMPIARINA .
Miantso an i Mamy Rakotoarivelo sy ny Me Hanitra ny tenanay Hanao Fanambarana @ izao Fandrarana ny fankalazana ny 29 Mars izao
Ary Mangataka an ‘ireo Hitarika ny Vahoaka miaraka @ rodobe Hankalaza izany fahatsiarovana izany .
@ maha président ny « parlement » anao dia ianao no hitarika ny vahoaka @ fankalazana izany lanonana izany .
Tokony hifona amintsika mihintsy i reny malala kanefa aleon’ny sasany mampidina ny patalohany.
Nisy Dadabeko izay niady ho an’i reny malala tany indochine satria moa zana-tany i Mada tamin’izany dia saika namohy ny ainy tany izy.Betsaka ny malagasy no niasa ho an’i reny malala ka tokony fahakasitrahana no azo fa tsy fandrobana ny haren’ny malagasy.Ny tena loza dia mbola misy tsy tonga saina ka izay no mahatonga anay ao amin’ny lafy8 manasa antsika rehetra hanao soso-kevitra ny amin’ny fomba hiverenan’i Dada haingana fa raha mihetsika isika dia androso kokoa ny raharaha:
Mahaleo anie ry dà ka foza e!tena hadinoko fa hay nisy iny hirany io.
Angamba efa nivadika palitao izy izao fa niara nankahala an’i dada koa
ry zareo, afa tsy i Raol ihany angaha????
F’angaha misy resaka fandrarana ny Gasy tsy hanao 29 mars izany koa??mba tian’ny foza ery ity
fanakatsakanana lava ity an??tapoan’ny mba manam-basy hany ka na lalitra manidina aza dia TOFIRINA.
27 mars 2012 à 22 h 13 min
Tsy hita koa izay mpihira malagasy pro-Dada.Mampalahelo mihintsy fa mitady foana aho sady raha vao dailymotion dia tsy afaka mandefa ilay izy aho izay no mahatonga ahy mandefa hira vahiny maro.
Rahoviana ihany ianareo sy Hoaiza no ho ao amin’ny lafy8?Hira hoan’ireo zokintsika:
28 mars 2012 à 9 h 21 min
ToKONY midina andalambe daolo mitondra pancarte ny ANDRon’ny 29 mars manao hoe;
Frantsay modia any aminareo fa aza mangalatra ny harenay lava eto ,tena afabaraka kosa aloha raha sanatria misy frantsay miaraka amidomelina mankalaza ny 29mars 1947 ao é! tena FANOMPANA ny MALAGASY !
Tsy maintsy hisy io ry Bako ary tsy hanotrona sanatria fa vao maika aza
HANAMPY IREO RÁ efa latsaka t@’izany andro izany ,izay voalazanao
fa FANOPANA ary fanaovana z’inona ny MAHERIFOANTSIKA, ireo tsotsoka ireo anie no mitifitra nivantana
ny Gasy izay no hilan’i domelina an’ireo e! ny Gasy mantsy efa manomboka tonga saina ANGAMBA??????
Précédent Article précédent : Juan de Nova, du gaz dans l’eau entre Madagascar et la France …
Suivant Article suivant : Antson’ny Filoha Ravalomanana : « Tsy izaho no mila amnistia »